Nditsho neerds zebhiya zinokufunda okuthile kwi-Bitter Minnesota yokuhambisa utywala ngebhasi-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
500L Brewhouse-umphunga oshushu, unikwe ingxelo eYokohama, eJapan
Nokuba ii-nerds zebhiya zinokufunda okuthile kukhenketho lwebhasi ye-Bitter Minnesota
Ixesha: 2020-07-10 I ngxelo: 27
Kwaye kubantu abatsha kwindawo yobugcisa bobugcisa, okanye mhlawumbi abo bangachazanga ixesha elininzi kwesinye isixeko okanye enye (inkonzo isebenza eMinneapolis naseSt. Paul), ndicinga ukuba kufanelekile ixesha nemali.
Izikhokelo zabakhenkethi ziqhuba wena kunye neqela elincinci labanye abathanda ibhiya kwibhasi yesikolo eblue ukuya kwiziselo, apho ungasela khona kakhulu okanye kancinci njengoko uthanda - yonke ibhiya ibandakanyiwe kukhenketho.
Amatikiti ayi-75 yeedola kumntu ngamnye, anokubonakala ngathi anyukile de uqwalasele iindleko zothutho phakathi kwezo ndawo kuthengwa kuzo, ukuba ubunokuzilungiselela ngokwakho, ungalingana nesiqingatha sexabiso lamatikiti ubuncinci. Ukuba ungumntu osela ngotywala kwaye uneebhiya ezimbalwa kwindawo nganye yotywala, iindleko zibuyiselwa ngokulula.
Ukhenketho lwethu lwangoLwesihlanu ebusuku luqale nge-6 ukuya nge-9 ngokuhlwa, kwaye ngenxa yokuba sithathe i-Uber ukuya kwindawo yokuqala yokuthengisa utshwala, sandise ubusuku bethu ngokukhetha ukuphuma kwezothutho ukubuyela kwindawo yolanda. Ewe, iibhiya esiziselayo emva kwentsimbi yesi-9 zazingaphezulu, kodwa kuba besinokutya okuninzi kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, oko bekufikelela kwiidola nje ezimbalwa.
Ibhasi ithatha abathengi nakweyiphi na indawo ezimbalwa ezichongiweyo ngaphambi kokuya kwindawo yokuqala yokuthengisa utshwala, kwimeko yethu, iModist.
I-Modist, i-brewery entsha eyenza ibhiya ehlala ihlala ngaphandle kwebhokisi, yayisisiqalo esihle. Nangona ndikhe ndadibana nezindlu ezininzi zokupheka, andikaze ndilichithe ithuba lokubona ukuba yeyiphi na into ethengisa inkqubo ethile. Kwimeko yeModist, benza ibhiya ngendlela endisazama ukusonga ngayo intloko. Ngaphandle kokufumana ubuchwephesha obuninzi, uninzi lweshishini lokusila ligaya okusanhlamvu kodwa kodwa lishiya ubukhulu becala lilungile. I-Modist igxotha eyabo kwaye ithumele umatshini ngokusebenzisa i-cut-edge, ikhonkrithi-njengesihluzi se-mash, izinto ezithandayo ezihlala zibonwa kwisikali esikhulu kakhulu.
Inkqubo isebenzisa amanzi amancinci kakhulu, kwaye ikwavumela utywala ukuba busebenzise iinkozo ongafane uzifumane kubhiya, njengerayisi kunye nesipelingi, kunye nokusebenzisa ubuninzi bezinye iinkozo eziqhele ukuvala iinkqubo zesiko, njenge ioats.
Sizamile iibhiya ezimbalwa kwidolophu yedolophu yaseMinneapolis, kubandakanya inqanaba leTropic elimnandi, eliphefumlelweyo le-tiki: Luhlaza okwesibhakabhaka kunye nebhiya eyenziwe kwintsalela yeRise Bagels.
Khange siye kwindawo elandelayo yotywala, iBrock Clock, efihlwe kwindawo yezorhwebo kakhulu eMantla Minneapolis. Iibhiya zaphoxeka kancinci emva kokundwendwela iModist, kodwa ayizange isithintele ekuphononongeni imenyu nasekufumaneni i-chery-key lime gose esasiyonwabele sonke.
Ukuma okokugqibela kukhenketho lwethu yenye yeendawo endizithandayo zotywala, eFair State. Umdibaniselwano wokusela usoloko unento emnandi kwaye intsha, kwaye iiflegi zawo nazo ziqinile. Sasampula indlela yethu kwimenyu, sifumana ipilsner enye etshayayo esele ikho kwimenyu, kodwa sikonwabela iketile eyoyikekayo eyotyiweyo, i-hibiscus-infusion saison, iRoselle. Kwakukho nohlobo olubandakanya ukongezwa kwamajikijolo athile.
Ngenxa yokunqongophala kwexesha, ukhenketho lwendlu yotywala lwalufumaneka kwindawo enye kuphela (iModist), kodwa ngenxa yokuba eyona nto inomdla kakhulu, khange siyikhathalele loo nto.
Ukhenketho luquka amashwamshwam (snacks) (iingxowa zeetshiphusi kunye nee-pretzels) kunye namanzi, ekumnandi ukuba nako ebhasini. Ukuba ufuna ukutya kwilori yokutya, kuya kufuneka uyihlawulele ngokwakho. Sayalela ukuba i-barbecue evela eMinnesota Barbecue Co ihanjiswe kwiFair State, eyayiyinto entle. Yenye yeendawo ezimbalwa ezinikezelwa yiTravail, indawo yokuthatha kuphela.
Previous: Itekhnoloji yoPhuculo
Okulandelayo: Abathengi baseThailand beze kutyelela iCOFF
200L yokufudumeza ioyile kwiBrewhouse S...